Izindaba - Ungasithola kanjani isicaphuni esinembile sephrojekthi yakho yesikhwama?
Amakhasimende amaningi afuna izimboni zezikhwama anethemba lokuthola izingcaphuno ezinembile ngokushesha okukhulu ngojosaka bazo abenziwe ngokwezifiso. Kodwa-ke, ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, kunzima kubakhiqizi ukukunikeza ikhotheshini enembile kakhulu ngaphandle kwemininingwane yesampula noma yesikhwama. Eqinisweni, kunendlela yokuthola ikhotheshini enembile, ake sibheke!
Amafektri esikhwama ngokuvamile abale inani ngokususelwa ekwakhiweni, impahla, nosayizi wesikhwama. Uma ikhasimende lithumela nje izithombe kumenzi walo, umenzi walo akaqiniseki ngemininingwane ethile yephakeji futhi akakwazi ukunikeza ikhotheshini enembile.
Ngakho-ke, uma ufuna ukuthola ikhotheshini enembile, indlela engcono kakhulu ukuthumela iphakethe lesampula kumkhiqizi bese uvumela umenzi ukuthi acaphune inani langempela. Uma ungenaso isampula somzimba, futhi unganikezela ngomdwebo wedizayini onemininingwane kumkhiqizi. Umenzi angenza ibhodi ngokwedizayini yakho. Ngemuva kokuthi isampula seligcwalisiwe, intengo izophuma.
Ngaphezu kwalokho, kubaluleke kakhulu nokuthenga ezitolo, ukuze uthole umbono omubi wentengo yezikhwama futhi ugweme ukukhohliswa abanye abakhiqizi abangajwayelekile ababika ngamanani aphezulu amanani aphezulu.